विशेष कुन–कुन नेता कहाँबाट मतदान गर्दै ?
Ujyaalo आइतवार, मंसिर १०, २०७४ १८:४१:००
काठमाडौं, मंसिर १० – आइतबार सुरु भएको पहिलो चरणको चुनावमा ३२ जिल्लाका मतदातासहित राजनीतिक पार्टीका नेताहरुले पनि भोट हाल्दैछन् । कुन नेताले कहाँबाट भोट हाल्दैछन् त ?
नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डाक्टर बाबुराम भट्टराईले गोरखा क्षेत्र नं २ बाट भोट हाल्दै हुनुहुन्छ । भट्टराईले गोरखाको पालुङ्टार नगरपालिकाको अन्नपूर्ण मावि खोप्लाङ केन्द्रबाट मतदान गर्दै हुनुहुन्छ ।
यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रकातर्फबाट गोरखा क्षेत्र नं. २ का उम्मेदवार नारायणकाजी श्रेष्ठले सिरानचोक गाउँपालिका ८ बाट जौबारी मतदान केन्द्रमा भोट हाल्दै हुनुहुन्छ । श्रेष्ठ गोरखा क्षेत्र नं. २ मा डा. भट्टराईसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ ।
नेकपा एमालेका नेता योगेश भट्टराईले ताप्लेजुङ मैवाखोला गाउँपालिका ३ बाट भोट हाल्दै हुनुहुन्छ । भट्टराईको निर्वाचन केन्द्र नारायणी उच्च माध्यमिक विद्यालय हो ।
नेपाली कांग्रेसका नेता चीनकाजी श्रेष्ठले गोरखा क्षेत्र नं. १ बाट भोट हाल्दै हुनुहुन्छ । श्रेष्ठले आरुघाट गाउँपालिकाको भीमोदय उच्च माध्यमिक विद्यालयबाट भोट हाल्दै हुनुहुन्छ ।
राप्रपा प्रजातान्त्रिकका संयोजक पशुपति शमशेर राणाले सिन्धुपाल्चोक १ क्षेत्रबाट भोट हाल्दै हुनुहुन्छ । सुनकोशी गाउँपालिका – २ मा भएको महेन्द्रोलय उच्च माध्यमिक विद्यालय राणाको मतदान केन्द्र हो ।
नेकपा एमालेका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले लमजुङको क्व्होदासोथार गाउँपालिका – ९ को बुद्धोदय माध्यमिक विद्यालयबाट भोट हाल्दै हुनुहुन्छ । नेपाली कांग्रेसका नेता बलबहादुर केसी सोलुखुम्बु जिल्लाको नेचा सल्यान गाउँपालिकाबाट भोट हाल्दै हुनुहुन्छ । उहाँको मतदान केन्द्र बिपी साँस्कृतिक केन्द्र हो ।
माओवादी केन्द्रका नेता तथा गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले रुकुम मुसीकोट नगरपालिका – ५ को यमुनानन्दनुमना उमाविबाट भोट हाल्दै हुनुहुन्छ । कांग्रेस नेता अर्जुननरसिहं केसीले नुवाकोटको क्षेत्र नं. २ बाट भोट हाल्दै हुनुहुन्छ । उहाँले ककनी गाउँपालिका २ को ओखरपौवा केन्द्रबाट मतदान गर्दै हुनुहुन्छ । उहाँ नेपाली कांग्रेसका नेता हुनुहुन्छ ।
कांग्रेस नेता डाक्टर रामशरण महतले नुवाकोटको क्षेत्र नं. १ मा भएको पञ्चकन्या गाउँपालिका २ को राष्ट्रिय उच्च माध्यमिक विद्यालयमा भोट हाल्दै हुनुहुन्छ । पूर्वमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता जीवनबहादुर शाहीले हुम्लाको प्रदेश सभा ख को खर्पुनाथ गाउँपालिका – ५ बाट भोट हाल्दै हुनुहुन्छ । उहाँको मतदान केन्द्र मन्डारा मावि , भगुन्डा मतदान केन्द्र हो । एमाले नेता शेरधन राईले भोजपुरबाट भोट हाल्दै हुनुहुन्छ । राईको मतदान केन्द्र आमचोक गाउँपालिका ३ को पसलेभञ्ज्याङ् हो ।
यस्तै एमाले नेता अरुण नेपालले सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सुनकोसी गाउँपालिका – ७ को लामोसाँघु बाट मतदान गर्दै हुनुहुन्छ । एमाले नेता राजेन्द्र पाण्डेले धादिङको गजुरी गाउँपालिका २ को कन्या प्राथमिक विद्यालयबाट भोट हाल्दै हुनुहुन्छ ।
माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले रोल्पालको लिवाङ नगरपालिका ६ को नाम्लिमा मतदान केन्द्रबाट मतदान गर्दै हुनुुहुन्छ । यहि मतदान केन्द्रबाट माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्व सभामुख ओनसरी घर्तीले पनि भोट हाल्दै हुनुहुन्छ ।
माओवादी केन्द्रकै नेता शक्तिबहादुर बस्नेतले जाजरकोटको भेरी नगरपालिका – १ को बागेश्वरी निम्न माध्यमिक विद्यालयको पिपे मतदान केन्द्रबाट भोट हाल्दै हुनुहुन्छ ।माओवादी केन्द्रका नेता अग्निप्रसाद सापकोटाले सिन्धुपाल्चोक १ को चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका ४ को पञ्चकन्या माध्यमिक विद्यालयबाट मतदान गर्दै हुनुहुन्छ ।
माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रसाद केसीले रोल्पा लिबाङ नगरपालिका ६ को कोटगाउँ मतदान केन्द्रबाट मतदान गर्दै हुनुहुन्छ ।